RW Itoobiya oo kulan deg deg ah iskugu yeeray Saraakiisha ciidamada & Maamulada Canfarta & Soomaalida.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Ahmed ayaa goor dhaw kulan deg deg ah la yeeshay madaxda Ismaamulada dalkiisa, gaar ahaan Soomaalida & Canfarta oo maalmihii u dambeeyey ay dagaalo culus dhexmareen.
Labada dhinacba wuxuu kala hadlay dagaalada culus ee dhacay, saameynta ka dhalatay iyo marxaladda hadda taagan oo ay si adag uga wada hadleen, waxaana uu amray dhammaan dhinacyada oo dhan.
Abiy ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin dagaalada soo noq-noqday ee kataagan xaduuda labada maamul, wuxuuna sheegay in ciidamada ammaanka looga baahan yahay in ay gacan bir ah ku qabtaan dagaaanshaha.
Taliyayaasha ciidamada Ammaanka oo madasha kusugnaa ayuu amray in la adkeeyo daganaanshaha deegaankaas, isla markaasna lala xisaabatmi doono cid kasta oo yeelatay masuuliyaddii halkaas ka dhacday.
Raysalwasaaraha ayaa sheegay in ficilka ay qaadeen maleeshiyada Canfartu uu yahay mid halis galinaya daganaanshaha, waxaana Madaxweynaha deegaanka Soomaalidu uu cadeeyey in cida dhibtay dhan geysatay ay yihiin maleeshiyaadka Canfarta oo ay gadaal ka riixayaan kuwa isbedelka diidan.
Inta la og yahay dagaaladii u dambeeyey ee kadhacay gobalka Sitti ayaa sheegaya in ay ku dhinteen in ka badan 130 qof oo ah dhinacyada, waxayna Canfartu weerar ku soo qaaday deegaano Soomaaliyeed oo ay isku dayeen in ay qabsadaan.
Banaanbaxyo Nabadeed oo kuwajahan xaaladda gobalkaas ayay maanta muujiyeen shacabka Soomaalida, waxayna sheegeen in ay falalkaas ahaayeen Xasuuq loo geystay Shacabka oo ay ka hortagayaan, waxaana cududa ciidamada lagu soo bandhigay banaanbaxyadan.